पारिस्थितिक घरहरूको विशेषताहरू र प्रकारहरू हरियो नवीकरणीय
पारिस्थितिक घरहरूको विशेषताहरू र प्रकारहरू
जर्मन पोर्टिलो | | हरियो घर, वातावरण
ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय उर्जाहरूले घरहरूलाई हरियाली हुन र वातावरणको अधिक ध्यान लिन प्रोत्साहित गर्दछ। पारिस्थितिक घर ती हुन् जसको ऊर्जा खपत न्यून छ र यसले वातावरण र पर्यावरणमा कुनै प्रभाव पार्दछ, उत्सर्जन र फोहोर दुबैमा।
तर एक पर्यावरणीय घर बनाउन सक्षम हुन हामीले सर्वप्रथम थाहा पाउनु पर्छ कि कुन सामग्री यसको लागि उपयुक्त छ र कुनले वातावरणमा प्रभाव उत्पन्न गर्दैन, दुवै निर्माण र उनीहरूको प्रयोगमा। थप रूपमा, त्यहाँ धेरै प्रकारका पारिस्थितिक घरहरू छन् जहाँ उनीहरू निर्माण गरिएका स्थानहरूमा निर्भर छन्, प्रयोग गरिएको सामग्री, आपरेशन जुन तपाईं उनीहरूलाई दिन चाहानुहुन्छ, आदि। के तपाइँ पारिस्थितिक घरहरूको बारेमा थप जान्न चाहानुहुन्छ?
1 पारिस्थितिक घरहरूको विशेषताहरू
1.1 बायोक्लामैटिक डिजाइन
1.2 वातावरणको लागि सम्मान
2 पारिस्थितिक घरहरूको प्रकार
2.1 पारिस्थितिक काठ घरहरू
2.2 पर्यावरण अनुकूल ईंट घरहरू
2.3 पारिस्थितिक ठोस घरहरू
3 एक पारिस्थितिक घर को लाभ के हो?
पारिस्थितिक घरहरूको विशेषताहरू
पर्यावरणीय घरहरूमा रहेको प्रकार र भिन्नताहरू थाहा पाउनु अघि पहिलो कुरा, हामी तिनीहरूको विशेषताहरू र उनीहरूले कसरी काम गर्दछन् भन्ने बारे जान्ने छौं। एक पारिस्थितिक घर एक बासस्थान हो जसले सूर्य र पृथ्वीको प्राकृतिक स्रोतहरूको फाइदा लिन्छ र त्यसले पनि वातावरण निर्माण गर्दछ यसको दुबै निर्माणको समयमा र एक पटक यो समाप्त भएपछि।
दुबै निर्माणमा र यसको प्रयोगको चरणमा अधिकतम संसाधनहरूलाई अनुकूलित गर्न, पारिस्थितिक घरहरूको डिजाइन परिष्कृत हुनु पर्छ र केही आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ, जस्तै:
एक बायोक्लीमेटिक डिजाइन भएको घर सक्षम छ अधिकतम वातावरण द्वारा प्रस्ताव संसाधन अनुकूलन, जस्तै सूर्यको किरणको घण्टा र घर ताप्न जमीनबाट उत्सर्जित गर्मी र अर्कोतर्फ, हावा चल्दा हावामा चल्नु र घरलाई शान्त पार्न।
बाहिरको तापक्रममा अचानक परिवर्तनबाट भित्ताहरू अलग गर्न, यी बायोक्लामैटिक डिजाइनहरू परम्परागत भन्दा धेरै ठूलो इन्सुलेशन मोटाई राखेर विशेषता गरिन्छ। यस तरिकाले न त बाह्य तातो न चिसो घर भित्र छिर्न सक्षम हुन्छ र आन्तरिक तापक्रम थप स्थिर राख्न सकिन्छ, वातानुकूलन वा तताउने उपकरणहरूको आवश्यकता बिना।
इन्सुलेशनको साथ बचतको तथ्यले ऊर्जा लाभहरू प्रदान गर्दछ, किनकि हामी बेवास्ता गरिरहेका छौं हरितगृह ग्यास उत्सर्जन वायुमण्डलमा घरको तापो वा चिसो गर्न बिजुली ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोगका कारण। यो अलगावको साथ हामी जलवायु परिवर्तनको बिरूद्ध लड्न मद्दत गरिरहेका छौं।
बायोक्लामैटिक डिजाइन पनि छ उचित अभिविन्यास सकेसम्म धेरै सौर विकिरण कब्जा गर्न। विशेष गरी दक्षिण अभिमुखिकरण, यो प्राय जसो सूर्यको सबैभन्दा बढी किरणहरू बुझ्छ। थप रूपमा, यो तातो तापीय जडत्वको साथ सामग्री द्वारा भण्डारण गर्न सकिन्छ, दिनको समयमा तातो कायम राख्न र यसलाई चिसो हुँदा रातमा रिलीज गर्न सक्षम छ।
हावाको प्रवाह उत्पन्न गर्न घरमा हावा र बाहिर हावा राख्न सकिन्छ भित्री आँगन ताकि हावा आवतजावत घरको सबै कोठामा पार भयो।
इकोलोजिकल घरहरूले पूरा गर्ने अर्को विशेषता भनेको उनीहरूका सामग्रीहरू वातावरणका साथ सम्मानजनक छन्। त्यो हो, ती सामग्रीहरू जुन उनीहरूले निर्माण गरेका छन् प्राकृतिक, रिसायकल गर्न सकिने वा पुनर्चक्रित छन् र एक सानो पारिस्थितिक पदचिह्न छ। थप रूपमा, हामी उनीहरूको उत्पादन र यातायात दुबैमा कम ऊर्जा चाहिने सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छौं।
हामी यी सामग्रीहरूमा थप्ने थप कुरा यो हो कि उनीहरू केवल वातावरणको मात्र सम्मान गर्दैनन्, साथै उनीहरूको स्वास्थ्य र कल्याणको पनि छ। यो किनभने पारिस्थितिक घरहरू निर्माण भएका सामग्रीहरू छन् रसायनिक वा विषाक्त हुँदैन यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ र घर भित्रको चुम्बकीय क्षेत्रहरू परिवर्तन गर्दैन, भित्र राम्रो वातावरण प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
हाइग्रोस्कोपिक सामग्रीहरू, उदाहरणका लागि, प्राकृतिक रूपमा आद्रता नियन्त्रण गर्नुहोस्, जसले गर्दा हाम्रो श्लेष्म झिल्ली र हाम्रो सास अति नै उच्च वा कम आर्द्रताबाट प्रभावित हुने छैन।
पारिस्थितिक घरहरूको प्रकार
पारिस्थितिक घरहरू निर्माण भएका सामग्रीका आधारमा त्यहाँ विभिन्न प्रकारका छन्। दिमागमा राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि एउटा घरलाई धेरै प्रकारका सामग्रीहरू आवश्यक पर्दछन् र माथि वर्णन गरिएका सुविधाहरू पूरा गर्न सबैलाई सँगै धेरै गाह्रो हुन्छ।
उदाहरणका लागि, काठ र ईंटको घर उनीहरूले निर्माण गरिएको वातावरण वातावरण र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई सम्मानजनक छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर नाम तोकेका विशेषताहरू पूरा गर्न सक्दछन्। जे होस्, कंक्रीट घरहरू प्राकृतिक र स्वस्थ सामग्रीको मापदण्ड पूरा गर्दैनकिनकी, क the्क्रीटमा आफैंले यस संरचनामा विषाक्त घटकहरू समावेश गर्दछ जुन न पर्यावरण र स्वास्थ्य हो। तर तपाईं घरहरू कसरी हरियो हुन सक्नुहुन्छ भनेर हेर्न यी घरहरूको विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ।
पारिस्थितिक काठ घरहरू
काठ एक पारिस्थितिक भौतिक बराबर उत्कृष्टता, बहुमुखी र यसले हाम्रो घरमा धेरै गर्मी ल्याउँछ। काठको मुख्य फाइदा भनेको यसमा हाइग्रोस्कोपिक क्षमता छ र घरमा आर्द्रतालाई उत्तम अवस्थामा राख्न मद्दत गर्दछ। हामीले ध्यानमा राख्नु पर्छ त्यो काठ भने वार्निशको साथ उपचार गरिन्छ, poresहरू भराईनेछ र यसले यसको hygroscopic प्रकार्य प्रयोग गर्न सक्नेछैन।
अर्को लाभ जुन काठले एक पारिस्थितिक घरलाई दिन्छ यसको राम्रो इन्सुलेट क्षमता हो। घरलाई इन्सुलेट गर्न, दुबै चिसो र तातोबाट, काठले हामीलाई बाहिरी तापक्रमबाट जोगाउन सक्छ। आफैंमा यो एक राम्रो इन्सुलेटर हो, तर यदि यो केहि सामग्रीसँग मिसाइएको छ जसले अझ बढी इन्सुलेट गर्न मद्दत गर्दछ भने, यसको दक्षता अधिक हुन्छ।
गर्मी यो काठको एक आन्तरिक विशेषता हो। त्यो हो, काठले घरमा ल्याएको तातोपनलाई संख्याले नाप्न सकिदैन, यो कुरा साँचो हो कि काठले बनेको भुइँ नरम छ र हाम्रो पाइलाहरू, पर्खालहरूको बनावट बनाउँछ, र अझ आरामदायी भएको अनुभूति दिन्छ। बदलामा यो एक जीवित सामग्री हो।
काठको घरको सामान्य डर आगो संग एक छयद्यपि, काठको घरहरूमा नियमहरू धेरै कडा हुन्छन् जब यो अति संवेदनशील बिन्दुमा बिजुली राख्ने आउँदछ जुन आगोमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। आज घरमा आगो लाग्ने प्रायः लापरवाह कारणहरू जस्तै असुरक्षित स्टोभले प्राय: सोफेहरू, कालीन वा पर्दा प्रज्वलित गर्दछ। तर यी आगो कुनै पनि प्रकारको घरहरूमा देखा पर्न सक्छ।
जे भए पनि, आगोले घरको काठको संरचनालाई असर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ काठको बाहिरी तह र यो कार्बोनेटेड छ।
यो समान तह, पहिल्यै जलेको छ, पहिलो सुरक्षाको रूपमा कार्य गर्दछ जसले बाँकी काठलाई द्रुत गतिमा जलाउन रोक्दछ।
पर्यावरण अनुकूल ईंट घरहरू
इकोलोजिकल ईंट घरहरू दोस्रो सबैभन्दा धेरै निर्माण गरिएको छ किनकि यो इतिहासमा काठको पछि सबैभन्दा प्रयुक्त टेक्नीक हो।
तिनीहरूलाई वर्णन गर्नु अघि, हामीले त्यो ध्यानमा राख्नु पर्छ हजारौं प्रकारका ईंटहरू छन्, त्यसैले प्रत्येक एक को विशिष्ट विशेषताहरु हुनेछ। यद्यपि, सामान्यीकरण गर्न हामी भन्छौं कि पर्यावरणीय घरहरू निर्माणका लागि उपयुक्त उत्तम ईट्टा भनेको नपकाएको माटोले बनेको हुन्छ, किनभने फायरिंगको लागि ठूलो मात्रामा उर्जा चाहिन्छ, जसले वातावरणमा ठूलो प्रभाव पार्छ।
ईंटहरू तिनीहरू समान लाभ वा काठको रूपमा प्रदान गर्दैनन्, किनभने तिनीहरू मध्ये धेरैमा यसलाई थर्मल इन्सुलेटर प्रयोग गर्न आवश्यक छ। थप रूपमा, घरको कुनाहरू इन्सुलेशनमा विच्छेदन भोग्छन् र त्यसैले बाहिरको तापक्रमलाई यत्तिको प्रभावकारी रूपमा नियमित नगर्नुहोस्।
आगोको विषयमा, ईंटले अझ राम्रो प्रतिक्रिया दिन्छ, किनकि तिनीहरूले आगो जलाउँदैनन् वा फैलाउँदैनन्। ईंट निर्माणको लागि प्राय: जसो लाइटवेट काठ प्रणालीसँग भन्दा अनुहार र भित्री पर्खालको मोटाई चाहिन्छ। यस कारणले गर्दा, हाम्रो घरको उपयोगी सतह अन्य केसहरू भन्दा केही सानो हुने थियो।
ईंटको बीचमा जction्कन पोइन्टहरूको लागि, सामग्री प्रयोग गर्नुहोस् हाम्रो स्वास्थ्य को लागी सुरक्षित छन् र त्यसले वातावरणमा न्यूनतम प्रभाव पार्दछ।
ईंट निर्माण का केहि प्रकारहरू हुन्:
क्याक्रेरियस ईंट पर्खाल
प्राकृतिक ढु stone्गाको पर्खाल
पारिस्थितिक ठोस घरहरू
यो ग्रीन हाउसको अन्तिम प्रकार हो जुन हामी हेर्ने छौं। कंक्रीट सिमेन्ट, समुह, पानी र, धेरै जसो अवस्थाहरूमा यसको केही विशेषताहरू परिमार्जन गर्नका लागि बनाइएको कृत्रिम ढु stone्गा सामग्री हो। यसले निर्माण गर्दछ पूरै पर्यावरणीय होइन, किनकि यसले वातावरणमा असर बिना टिकाऊ निर्माणको आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन।
ईंट र काठ, कंक्रीटको तुलनामा योसँग राम्रो थर्मल क्षमता छैन र न यो हाइग्रोस्कोपिक हो, त्यसैले तिनीहरू तापक्रम र भित्री आद्रता राम्रोसँग नियमन गर्दैनन्। थप रूपमा यससँग थोरै पर्यावरणीय पदचिन्ह छ, किनकि यसको उत्पादनको लागि ठूलो मात्रामा ऊर्जा चाहिन्छ।
धातु एक त्यस्तो सामग्री हो जुन हामीले कुनै पनि प्रकारको इकोलोजिकल घरहरूमा बेवास्ता गर्नुपर्दछ, किनकि यो कुनै पनि पर्यावरणीय होइन र यसले वातावरणको प्राकृतिक चुम्बकीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरेर घरको स्वस्थ वातावरणलाई पनि मनपर्दैन।
किनकी कंक्रीट विश्वव्यापी रूपमा एक व्यापक प्रयोग सामग्री हो, यो एक धेरै सस्तो र सस्तो सामग्री बनाउँछ सबै बजेटहरूको लागि।
जैव निर्माण, एक पारिस्थितिक, स्वस्थ र कुशल निर्माण
एक पारिस्थितिक घर को लाभ के हो?
छवि - विकिमिडिया / लामियट
एक पारिस्थितिक घर को लाभ दक्षता को सुधार र पर्यावरणीय प्रभाव र पारिस्थितिक पदचिह्न को कमी मा आधारित छन्। प्रत्येक घर एक निश्चित तरीका मा डिजाइन गरीएको छ त्यसैले यो एक अर्का बाट धेरै फरक पहलुहरु हुनेछ। जे होस्, मुख्य आवश्यकताहरु कि उनीहरु लाई पक्का गर्न को लागी सुनिश्चित गर्न को लागी कि उनीहरु सबै एकै प्रकार्यहरु छन् निम्न छन्:
बायोक्लेमेटिक वास्तुकला: यो दिगो निर्माण सामग्री र रिसाइक्ड सामग्रीहरूको प्रयोगमा आधारित छ। यस प्रकार, कच्चा मालको प्रयोगमा कटौती र उक्त सामग्रीको निर्माण र प्रयोगबाट उत्पन्न वातावरणीय प्रभाव हासिल हुनेछ।
अभिमुखीकरण: घर उर्जा स्रोतहरूको एक अनुकूलन गर्न उन्मुख हुनु पर्छ।
सौर संरक्षण: उन्मुखीकरणले ऊर्जा श्रोतहरूको प्रयोग गर्न कोशिस गर्दै जस्तै तपाईले सूर्यको किरणबाट पनि सुरक्षा लिन पर्छ।
ग्रीन हाउस प्रभावको फाइदा लिनुहोस्: यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि बिजुली उर्जाको प्रयोग घटाउन घरको तापक्रम तापको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। यस तरिकाले, एक प्राकृतिक हरितगृह प्रभाव एक इष्टतम तापमान प्राप्त गर्न प्रयोग भएको छ।
सिलि and र इन्सुलेशन: सीलिंग र इन्सुलेशन आन्तरिक तापक्रमलाई नियमित गर्न आवश्यक छ। उचित इन्सुलेशन र मोहरको लागि धन्यवाद, हामी घरको लागि बिजुली उर्जाको प्रयोग घटाउन सक्छौं। उदाहरण को लागी, गर्मी मा वातानुकूलन को लागी उर्जा को उपयोग कम हुन सक्छ।
थर्मल जड़त्व: अघिल्लोसँग सम्बन्धित छ। थर्मल ऊर्जा हुन सक्ने सामग्रीहरू खोज्न यो महत्वपूर्ण छ। यी सामग्रीहरू हुन् जसले कम बिजुली ऊर्जा प्रयोग गर्न राम्रो ऊर्जा स्थानान्तरण गर्न सक्छन्।
हरियो घरको कार्यहरूको मुख्य उद्देश्य कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्नु र प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिक राम्रो पार्नु हो।
निष्कर्ष को माध्यम बाट, यो भन्न सकिन्छ कि सबैभन्दा कुशल पर्यावरणीय घरहरु ती हुन् जुन काठले बनेको हो। यस जानकारीको साथ तपाईले पारिस्थितिक घरहरू र उनीहरूका विशेषताहरूका बारे अझ बढि जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » वातावरण » पारिस्थितिक घरहरूको विशेषताहरू र प्रकारहरू
भिक्टर आर कास्टेडा आर भन्यो
यसले मलाई हरियो घरहरूको अन्वेषण गर्न जारी राख्नको लागि अधिक हौसला प्रदान गर्दछ। धन्यबाद, भगवान तपाईंलाई धन्यबाद दिनुहुन्छ।
भेक्टर आर Castañeda आर मा जवाफ दिनुहोस्
ठाडो पवन टरबाइन